Soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha wax-soo-saarka ee Ultra Precision - China Ultra Precision Production Solutions Warshada
Qayb-xiran ee Granite Air Bearing ee Marxaladda Qaadista Hawada iyo heerka meelaynta.
Marxaladda meelaynta waa saxsanaan sare, saldhig granite, heerka meelaynta hawada ee codsiyada meelaynta dhamaadka sare.
Saldhig mashiinka Granite
Saldhigga Mashiinka Granite waa sida sariirta mashiinka si ay u bixiso sagxadaha saxda ah ee sare. Mashiinno aad u badan oo sax ah ayaa dooranaya qaybaha granite si ay u beddelaan sariirta mashiinka birta ah.
Dusha sare ee Granite oo leh Taageerada Golaha Wasiiradda Bir Alxan
U isticmaal saxanka dusha sare ee Granite, qalabka mashiinka, iwm. udub dhexaad u ah ama taageero.
Alaabtani way ka sarraysaa culayska.
Taageerada aan la saari karin
Saxanka dusha sare wuxuu u taagan yahay saxanka dusha sare: Saxan Dusha Granite iyo Saxanka Birta Cast.
Lagu sameeyay iyadoo la isticmaalayo walxo tuubooyin labajibbaaran iyadoo xooga la saarayo xasiloonida iyo fududaynta isticmaalka.
Waxaa loo qaabeeyey si saxanadda sare ee dusha sare loo sii hayo muddo dheer.
Saxanka dusha sare ee Birta ah ee saxda ah
Saxanka dusha sare ee kabka ah ee kabka T waa qalab cabbiraadda warshadaha inta badan loo isticmaalo in lagu sugo qalabka shaqada. Shaqaalaha fadhigu waxay u adeegsadaan khaladka, rakibidda, iyo dayactirka qalabka.
Shaxda dahaaran ee Vibration Optic
Tijaabooyin sayniseed ee bulshada cilmiga maanta waxay u baahan yihiin xisaabin iyo qiyaaso sax ah oo badan. Sidaa darteed, qalab ka fogaan kara deegaanka dibadda iyo faragelinta ayaa aad muhiim u ah cabbirka natiijooyinka tijaabada. Waxay hagaajin kartaa qaybo kala duwan oo indhaha ah iyo qalabka sawir-qaadista mikroskoob, iwm. Goobta tijaabada indhaha waxay sidoo kale noqotay wax-soo-saarka tijaabooyinka cilmi-baarista sayniska.
Taageero la go'i karo
Istaag - Si loo waafajiyo Taarikada Dusha sare ee Granite (1000mm ilaa 2000mm)
Dusha Plate Istaag oo leh habka ka hortagga dhicista
Taageerada birta ah waxay ku habboon tahay taageerada saxanka granite ee macaamiisha.
Jack wuxuu u dejiyay saxanadda dusha sare ee Granite
Alaabooyinka cabbirkoodu ka badan yahay 2000x1000mm, soo jeedi inaad isticmaasho Jack (5pcs hal set).
Dawaarle-Made UHPC (RPC)
Codsiyada kala duwan ee aan la tirin karin ee qalabka casriga ah ee uhpc weli lama saadaalin karo. waxaanu horumarinay oo aanu soo saarnay xalal warshadeed oo la xaqiijiyay warshado kala duwan anagoo la kaashanayna macaamiisha.
Sariirta Mashiinka Buuxinta Macdanta
Birta, alxanka, qolofka birta ah, iyo qaab dhismeedka kabka waxaa ka buuxsamay gariir yareynaya shubista macdanta
Tani waxay abuurtaa qaab-dhismeedyo isku dhafan oo leh xasillooni muddada-dheer ah oo sidoo kale bixisa heer aad u fiican oo adag oo firfircoon
Sidoo kale waxaa lagu heli karaa walxo buuxinta shucaaca nuugaya
Sariirta Makiinada Casinta Macdanta
Waxaa si guul leh naloogu matalay warshado kala duwan sanado badan iyada oo ay ku jiraan qaybo horumarsan oo laga sameeyay macdanta. Marka la barbardhigo walxaha kale, ku shubista macdanta ee injineernimada farsamada waxay bixisaa faa'iidooyin badan oo cajiib ah.
Granite saxda ah, Saxnimada Granite Square Ruler, Epoxy Concrete, Isbarbardhigga Granite Saxda ah, Mashiinka Dheelitirka Horizontal, Saxanka Granite Cube,